संघीयता सफल पार्न नागरिकले विकासको अपनत्व लिनुपर्छ - Karobar National Economic Daily
संघीयता सफल पार्न नागरिकले विकासको अपनत्व लिनुपर्छ
query_builderMarch 29, 2017 10:55 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility700
विकास विज्ञ/पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला । तस्विर:दिपक गाउँले
मुलुकलाई संघीय व्यवस्थाअनुरूपको अमा बदल्दै गर्दा नागरिकले तीव्र विकासको अपेक्षा गरिरहेका छन् । ७ सय ४४ स्थानीय तह गठन गरी कार्यान्वयनका लागि बजेट नै प्रवाह गरिसकेको सरकारले आउँदो वर्ष एउटै स्थानीय तहका लागि कम्तीमा ४ करोड रुपैयाँ केन्द्रीय बजेट सीधै पठाउँदैछ ।
यो बजेटबाट स्थानीय तहमा नागरिकले चाहेको विकास गर्ने सरकारको दाबी छ । तर, पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भने मुलुकलाई संघीय व्यवस्थामा लैजाँदै गर्दा यसको दिगोपनाका लागि स्थानीय स्तरको विकासमा नागरिकले अपनत्व राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सिटौलाको तर्क छ । संघीय नेपालमा पूर्वाधार विकासका चुनौती, बजेट कार्यान्वयनका समस्या र विकास सहायताका विषयमा सिटौला र कारोबारकर्मी विजय देवकोटाबीचको कुराकानी ः
विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने खालका कुनै कारणबिनै यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा पुरानै प्रवृत्ति देखियो, यहाँको विश्लेषणमा यी समस्या दोहोरिइरहनुका कारण के हुन् ?
विगतमा झैं यस पटक पनि पुँजीगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा हुन नसक्ने देखिएको छ । पुँजीगत खर्च गर्न यो पटक केही सकारात्मक आधार चाहिँ थिए । जस्तो कि ः बजेट जेठमै ल्याइएको थियो, बन्दहड्ताल कम भएको र इन्धन आपूर्तिमा समस्या नभएको जस्ता अनुकूल स्थिति छ ।
भूकम्पको प्रकोपबाट देश विस्तारै बाहिर निस्कँदै थियो । यस्तो अनुकूल अवस्थामा कम्तीमा मुलुकको पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्ने थियो, तर बढेन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण विगतमा देखिएका समस्या आधारभूत तहमै हल हुन नसक्नु हो ।
ठेक्का सम्झौता गर्न कर्मचारीले जति जोस–जाँगर देखाउँछन्, कार्यान्वयनका क्रममा त्यो देखाउँदैनन् ।
बजेट छुट्ट्याएपछि निरन्तर काम हुन सक्ने खालका आयोजना बजेटमा राख्नुपथ्र्यो, तर बिनातयारीकै आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने समस्या यथावत् रह्यो । आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश हुने रातो किताबमा हेर्नेबित्तिकै सजिलै यो आयोजनाको काम हुँदैन भन्न सक्ने स्थिति छ, किनकि बजेट छुट्ट्याइए पनि आयोजना तयारी गर्नकै लागि १ वर्ष समय लाग्छ ।
दोस्रो, जग्गाप्राप्तिको समस्या थप जटिल बन्दै छ । त्यसले सीधै आयोजना विकासमा धक्का दिएको छ । जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाउँदा कामले गति लिन्छ, जस्तो ८० प्रतिशतसम्म जग्गा प्राप्त नभए दाताहरूले ठेक्का सम्झौता नै गर्दैनन् ।
हामीकहाँ चाहिँ आयोजनालाई बजेट विनियोजन हुनासाथ ठेक्का सम्झौता गर्न हतारिन्छौं, जबकि ठेक्का लगाइसकेपछि काम हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । ठेक्का सम्झौता गर्न कर्मचारीले जति जोस–जाँगर देखाउँछन्, कार्यान्वयनका क्रममा त्यो देखाउँदैनन् ।
आयोजनास्थलको जंगल कटान गर्ने प्रक्रिया लामो छ । वातावरणीय स्वीकृति लिने प्रक्रिया पनि त्यति सहज छैन । यी समस्या निकै अघिदेखिका हुन् । त्यसकारण, यी समस्या समाधान भएन भने यो वर्षमा मात्र नभई आउँदा वर्षमा पनि यसको असर देखिन्छ र फलस्वरूप बजेट खर्चन सरकारलाई सकस पर्नेछ ।
यहाँले उल्लेख गर्नुभएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न निर्णय गर्याे, विकासका कामलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयं अनुगमनमा हिँड्नुभयो, राष्ट्रिय योजना आयोगको टिम नै अनुगमनमा दौडिरहेको देखिन्छ, यो पहल पनि अपुग भएको हो ?
यो वर्ष केही नीतिगत सुधार भएकै हो । विगतमा ठेकेदारहरूले कुनै आयोजनाको ठेक्का निकै घटेर लिने र समयमा काम नगर्ने समस्या थियो । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको संशोधनले यो समस्या हटाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
बजेट अख्तियारीदेखि स्वीकृतिसम्मका प्रक्रियामा पनि सहजीकरण गरिएकै हो । तर, कानुन संशोधन भएपछि त्यसको नतिजा देखिन अर्को वर्ष कुर्नुपर्छ । बाँकी रह्यो, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनदेखि योजना आयोगले गरेको अनुगमनसम्मको कुरा । देशभर ४ सय पुल निर्माणाधीन भए पनि निर्माणको कामचाहिँ आधा अर्थात् २ सय आयोजनामा मात्र हुने समस्या अहिले पनि यथावत् छ ।
राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउने गरी बजेट ल्याउँछ । त्यो योजना सम्बन्धित योजना प्रमुखका लागि मात्र गौरवको हुने, अरू निकायलाई कुनै चासो नहुने स्थिति देखियो ।
तयारी र समन्वय अभावका कारण काम रोकिने गर्छ । म सचिव हुँदा काम भएको स्थानमा व्यक्तिगत निर्णयले भुक्तानी दिने र पछि अर्थमन्त्रालय तथा योजना आयोगसँग आवश्यक समन्वय गरी खर्च स्वीकृत गर्थें । यसो गर्दा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतसम्म पु-याउन सकिन्थ्यो ।
अहिले त झन् सहज भएको छ । आयोग र अर्थले नै भएको काममा खर्च गर्न सक्ने अख्तियारी सम्बन्धित निकायलाई दिएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा त पुँजीगत खर्च बढ्नैपर्ने हो, तर बढेन । किनकि प्रक्रिया नयाँ ल्याइयो, तर पुराना समस्याचाहिँ निराकरण गरिएन ।
अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । आचारसंहितादेखि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति निर्वाचनमा खटिनुपर्ने कारणले खर्च क्षमतामा झन् गिरावट आउने देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा नै धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ अझै विद्यमान छ ।
आयोजना/परियोजनाका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुने, तर भौतिक र वित्तीय प्रगति सधैं कमजोर देखिने समस्या यथावत् छ । किन खर्च भएन भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा सरकार सधैं पुरानै समस्या दर्साएर बस्ने गरेको छ, यी समस्या समाधान नै गर्न नसकिने खालका हुन् ?
समन्वय अभाव नै प्रमुख समस्या हो । राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउने गरी बजेट ल्याउँछ । त्यो योजना सम्बन्धित योजना प्रमुखका लागि मात्र गौरवको हुने, अरू निकायलाई कुनै चासो नहुने स्थिति देखियो ।
वन, वातावरण र प्रशासनदेखि नागरिकसम्मले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवसँग जोडेर हेरे मात्र काम अघि बढ्न सक्छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायबाहेक अरुले यस्ता परियोजनालाई प्राथमिकता नै दिँदैनन् ।
व्यक्ति गएर बन फँडानी गर्दा कसैले वास्ता नगर्ने, तर राज्यको प्राथमिकता प्राप्त योजना बनाउन बन क्षेत्र खाली गर्नुपरे वन क्षेत्रका तल्लो तहका कर्मचारीले फाइल लत्याईदिने समस्या अझै छ । क्याबिनेटले नै निर्णय गर्दा पनि तल्लो तहबाट काम रोकिने समस्या यथावत् छ ।
अर्कातर्फ हरेक आयोजनालाई राज्यले तोकेको प्राथमिकताअनुसार सबै निकायले प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो नभएसम्म एउटै निकायका कारण आयोजना रोकिने र काम नहुने अवस्था आउँछ । अहिले भइरहेको समस्या यही हो ।
यी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि योजना तयारीमै ध्यान दिनुपर्छ । कुनै आयोजनाको काम अर्को वर्षदेखि थाल्ने हो भने यो वर्षदेखि नै जग्गाप्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन, वनको स्वीकृतिजस्ता प्रक्रिया अघिल्लो वर्षमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । ताकि, आयोजनालाई निर्वाध रूपमा अघि बढाउन सकियोस् ।
विकृति भइरहँदा पनि दण्ड र सजायको प्रावधान लागू भएको छैन, किनकि राज्य सञ्चालनको तहमा रहेका व्यक्तिहरू लोभिने समस्या बढी छ ।
अहिले जुन ऐननियम संशोधन गरिएको छ, त्यसलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । अहिले धेरै निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा धेरै काम ओगटेका छन् । एउटै उपकरण, एउटै पुँजी र एकै जनशक्ति धेरै ठाउँमा देखाउने र धेरै आयोजनाको ठेक्का हात पार्ने विकृति अझै व्याप्त छ ।
यस प्रकारले आधा दर्जन आयोजना ओगट्ने र पालैपालो काम गर्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिले हाम्रो विकास प्रयासलाई अधोगतितर्फ डोहो¥याइरहेको छ । अहिलेको ऐनले केही प्रहार त गरेको छ, तर सरकारले कार्यान्वयनमा हेलचेक्र्याइँ ग-यो भने समस्या यथावत रहन्छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई विकासका काम किन रोकेको भनि सोध्दा सरकारलाई देखाउने, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिने प्रवृत्ति तपाईं सचिव हुँदा पनि थियो, आज पनि छ । यी दुई पक्षमध्ये बढी दोषी को हुन् ?
तयारी नै नगरी आयोजनामा बजेट खन्याउने सरकारी समस्या त छँदै छ । तर, आयोजना ओगटेर सरकारलाई दोष दिने ठेकेदारहरू यो समस्यामा बढी जिम्मेवार छन् ।
क्षमताभन्दा बढी काम लिने र विकास अलपत्र पारिदिने काम ठेकेदारबाट भइरहेको छ । यस्तो विकृति भइरहँदा पनि दण्ड र सजायको प्रावधान लागू भएको छैन, किनकि राज्य सञ्चालनको तहमा रहेका व्यक्तिहरू लोभिने समस्या बढी छ ।
तपाईं स्वयम् भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि लक्ष्यअनुसार विकासका काम भएका थिएनन्, कर्मचारी यसरी किन लोभिने रहेछन् ?
एक त हाम्रो समाज सानो छ । कसैले चाहेमा शक्तिकेन्द्रसँग सजिलै सम्बन्ध बनाउन सक्ने स्थिति छ । विकास–निर्माणका क्षेत्रमा देखिने यो समस्याबारे चर्चा गरौँ । सबैभन्दा तल्लो वर्गको ठेकेदारले पनि चाह्यो भने सीधै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग सम्बन्ध बनाउन सक्ने वातावरण राजनीतिले सिर्जना गरिदिएको छ ।
पहुँच भएपछि त्यो ठेकेदारले आयोजना ओगट्छ र काम गर्दैन । काम नगरेकालाई कर्मचारीले कारबाही गर्न खोजे कार्यकारी प्रमुखकै तहबाट एकपटकलाई कारबाही नगरौं, फलानोलाई चाहिँ गल्ती नै गरे पनि केही नगरौं भन्ने दबाब आउँछ ।
अर्को समस्याचाहिँ अख्तियारजस्ता निगरानीकर्ता निकायको दबदबा हो । बिनाकारण अनावश्यक हस्तक्षेप भइरह्यो, जसले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई नै विवादमा पारिदियो । ठेकेदारको सम्बन्ध अख्तियारका पदाधिकारीसँग हुने र कर्मचारीले कारबाही गर्न खोजे बिनाकारण अख्तियारमार्फत सोधपुछ गरी दुःख दिने कामसम्म हुने गर्छ ।
काम गर्न खोज्दा बिनाकारण कारबाही हुने भएपछि कर्मचारीले काम गर्दैन, त्यसपछि विकास प्रभावित हुन्छ । त्यसैले, ठेकेदार वा उच्चपदस्थसँग झगडा गर्नुभन्दा लोभलाभको बाटोबाटै आफू सुरक्षित हुने कारणले कर्मचारीमा यस्तो समस्या देखिएको हो ।
हामीकहाँका निगरानीकर्ता निकायहरू पारदर्शिता कायम गराउनेभन्दा पनि लेनदेनतर्फ उन्मुख छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
अख्तियारको अघिल्लो नेतृत्वले विकासका काममा बढी नै हात हालेको हो । प्रत्यक्ष–परोक्ष जसरी अभिव्यक्ति दिए पनि अख्तियारको कदम पारदर्शी थिएन । विकास रोक्नेलाई दण्ड र सजाय नै गर्न नसकिने अवस्थासम्म आयो । कारबाही ग¥यो कि अनेकानेक आरोप लगाएर अख्तियार जाने र अख्तियारले पनि कर्मचारीलाई नै समस्यामा पार्ने काम भयो ।
पूर्वाधार विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ, तर संशोधन गरिएलगत्तै नयाँ समस्या देखाउने प्रवृत्ति हाबी छ, किन यस्तो हुने गर्छ ?
विकासलगायत सबै क्षेत्रसम्बद्ध ऐनकानुन संशोधनमा हामी बढी उदार भइरहेका छौं, जसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, त्यही क्षेत्रका व्यक्ति कानुन तर्जुमा गर्ने स्थानमा पुगिरहेका छन् । यही क्रम जारी रहे राज्यसँग विकृति नियन्त्रणका कुनै अस्त्र बाँकी नहुने जोखिम बढ्दै छ ।
कानुन संशोधन समस्या हल गर्नेभन्दा पनि स्वार्थ परिपूर्ति गर्नेतर्फ गयो । छिटो छिटो कानुन संशोधन गर्दा त्यसको दिगोपनामा समेत समस्या आइरहेको छ ।
असल मनसायले कानुन संशोधन गर्दा समस्या समाधान हुने हो, खराब नियतले संशोधन गर्दा कानुनी प्रावधान परिवर्तनले थप समस्या सिर्जना गर्छ, यस्तो समस्यालाई कानुनमै समावेश गर्ने नियत रहन्छ, तसर्थ कानुन परिवर्तनमा स्वार्थ समूहभन्दा सरकार हाबी हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा पछिल्लो पटकको संशोधनले फेरि विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने खतरा देखिन्छ । २ करोड रुपैयाँसम्म लागत रहने आयोजनाको ठेक्का बिनायोग्यता र बिनाक्षमताका ठेकेदारलाई दिन सक्ने व्यवस्थाले समस्या ल्याउन सक्छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा पछिल्लो पटकको संशोधनले फेरि विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने खतरा देखिन्छ ।
नियमावलीमै यस्तो व्यवस्था भएपछि जिल्लास्तरका बिनाक्षमताका ठेकेदारले सजिलै आयोजना ओगट्ने र काम नहुने समस्या बढ्ने जोखिम छ । यसको असर भयावह हुन सक्छ । मनसाय राम्रो भएको अवस्थामा समस्या नपरे पनि हामीकहाँका ठेकेदारसँग त्यस्तो अपेक्षा राख्न सकिँदैन । यसले अन्ततः पुँजीगत खर्च क्षमतामै आक्रमण गर्छ ।
गएको १० वर्षको अवधिमा स्थापित निर्माण व्यवसायीहरूले सोखको काम गरे । ‘क’ वर्गको ठेकेदारले भर्खर दर्ता भएको ठेकेदार कम्पनीलाई फर्म बेचिदिने, आफूले त्यसबापत कमिसन लिने र काम भइहाले थप लाभ लिने प्रवृत्ति व्याप्त भयो ।
कामै नभए पनि अग्रिम कमिसन खाने विकृति समेत बढ्यो । राज्यले ‘क’ वर्गको काम खोजेकोमा यस्तो विकृतिले ‘घ’ वर्गको काम मात्र भयो, अर्कातर्फ अरूको फर्मबाट ठेक्का पार्नेसँग क्षमता हुँदैन र त्यसले समयमा काम गर्ने सम्भावना पनि शून्य प्रायः नै हुन्छ । यो विकृतिले गएको १० वर्षमा ४० प्रतिशत परियोजना प्रभावित भएका छन् । अहिलेको ऐनले सम्बोधन गर्न त खोजेको छ, तर व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नेमा चाहिँ म शंका गर्छु ।
गलत काम गर्नेलाई कारबाही नै गर्न नसक्ने थिति बसाइयो, यो किन भयो ?
कारबाही गर्न सकिन्छ, कानुन पनि छ तर कारबाही गर्ने निकायका अधिकारीहरूसँग इच्छाशक्ति र पारदर्शिताको बल हुनुपर्छ । कर्मचारीले आफ्नो दायित्व बोध गर्नुपर्छ । यो ब्युरोक्रेसीको अधिकार पनि हो । तर, यस्तो कारबाही निष्पक्ष भएर गर्ने र आफ्नो दायित्व बहन गर्ने काम अहिले पनि भइरहेको छैन ।
यसका पछि दुईवटा कारण छन् । पहिलो त गलत काम गरेका ठेकेदारलाई फेर्दा आयोजना निर्माणको अवधि लम्बिन जान्छ र अर्को चाहिँ अहिले काम नगरे पनि केही समयभित्र काम गरिहाल्छन् कि भन्ने अपेक्षा राखिन्छ, किनकि काम त जसरी पनि सम्पन्न गर्नु नै पर्छ ।
नयाँ ठेक्कामा जाँदा लाग्ने समयावधिको जोखिमलाई ठेकेदारले काम नगर्ने अवसरका रूपमा लिने गरेका छन् । यस्ता ठेकेदारहरू नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन् । राजनीतिक संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति यथावत् नै छ ।
मुलुक संघीय व्यवस्थामा जाँदै गर्दा योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनको स्वामित्वसम्म परिवर्तन हुने देखिन्छ, यसले मुलुककै समग्र विकास प्रक्रियालाई नयाँ गति दिने सरकारले दाबी गरिरहेको छ, नयाँ प्रशासनिक संरचनाबाट विकास अघि बढाउँदा हुने फाईा र चुनौती के हुन सक्छन् ?
सुरुका केही वर्षसम्म समस्या पर्छ, यो स्थितिलाई तपाईंले पनि विश्लेषण गर्नुभएकै छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले क्षमता विकास गर्न सकेन भने विकासमा पनि केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ, जसले संघीय संरचनाको अधिकार र दायित्वलाई प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन ।
अहिले स्थानीय तहमा जनशक्ति निकै कम छ । केन्द्रीय स्तरका जनशक्ति सजिलै तल्लो तहमा पठाउने आधार पनि छैन । सरकारले प्रयास गरे पनि केन्द्रमा बसेर विज्ञ भइखाएका जनशक्ति आयोजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा जान चाहँदैन ।
यो समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुरुका केही अवधिमा परामर्शदाता र विज्ञ लगेर काम गर्न सकिन्छ । यस्तो आउटसोर्सिङलाई लामो समयसम्म कायम राख्नचाहिँ हुँदैन । स्थानीय तहले नै क्रमशः क्षमता विस्तार गर्दै विकास व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसो हुन सक्दा पाँच वर्षसम्ममा स्थानीय तहले नै आफूलाई आवश्यक विकासका काम अघि बढाउन सक्छन् ।
स्थानीय तहबाटै विकास अघि बढाउँदा अपनत्व कायम हुनजान्छ, यो फाइदाको पक्ष हो । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आयोजना ओगटेको ठेकेदारलाई मेरो ठाउँमा किन काम भएन भनेर जवाफदेही बनायो भने आधा समस्या आफैं हल हुन्छ । समयमा काम गर्न बाध्य बनाउन सक्नुपर्छ ।
कारबाही गर्ने निकायका अधिकारीहरूसँग इच्छाशक्ति र पारदर्शिताको बल हुनुपर्छ । कर्मचारीले आफ्नो दायित्व बोध गर्नुपर्छ ।
यसका लागि सचेत जनप्रतिनिधि चयन हुनु आवश्यक छ । मिलीजुली रूपमा कृत्रिम योजना बनाएर सम्पन्न गर्ने कामको जोखिम छ । यद्यपि अहिले हरेक स्थानीय तहमा एक इन्जिनियर खटाइँदैछ, यसले विकास प्रभावकारितामा ठूलो अर्थ राख्छ । संघीय व्यवस्थामा विकासमाथि जनताको अपनत्व कायम भएमात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन्छ ।
स्थानीय तहका नागरिकमा नयाँ प्रशासनिक संरचना गठनसँगै विकास अपेक्षा चुलिँदो छ, अपेक्षाअनुसारको विकासका लागि केन्द्रले निश्चित स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ, हाम्रा स्थानीय तहको आम्दानी कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा विकासका लागि आवश्यक स्रोतको परिपूर्ति कसरी गर्ने ?
केन्द्रबाट जाने अनुदान एक निश्चित ढाँचा र सर्तअनुसार मात्रै प्रवाह हुन्छ । यस्तो अनुदान खर्च गर्ने क्षेत्र पनि केन्द्रले नै तोकिदिन्छ, किनकि अधिकारका नाममा स्थानीय तहलाई मनमौजी खर्च गर्न दिँदा विकास सन्तुलन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्छ । सबल स्थानीय तहले केन्द्रको अनुदान प्रभावकारी ढंगले खर्च गरे पनि दुर्बल प्रशासकीय एकाइहरूमा अपेक्षाअनुसारको काम नहुन सक्छ ।
स्रोत व्यवस्थापनको विषय निकै महŒवपूर्ण छ । सुरुका केही बर्षसम्म स्थानीय तहमा भरपर्दो आर्थिक स्रोत विकास भइसकेको हुँदैन । कर उठाउने र व्यवस्थित गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ । केन्द्रबाट जाने अनुदान कटौती हुँदैजाने र आफ्नो स्रोत विकास नभइसकेको अवस्थामा नागरिकको अपेक्षाअनुसारको विकास अघि बढाउनु निकै चुनौतीको काम हो । यद्यपि यस्तो चुनौती निश्चित समयसम्मका लागि मात्र हो । व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार आउँदा समस्या हल हुँदै जान्छ ।
स्थानीय तहबाट ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि विकास हुन जरुरी छ, स्थानीय तहले यो क्षमता कसरी विकास गर्न सक्लान् ?
संघीयता कार्यान्वयन क्रममा यो विषयले निकै महत्व राख्छ । अहिले केही सय किलोवाटको जलविद्युत्का टर्वाइन बिग्रँदा पनि चीनबाट प्राविधिक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ, यसले परियोजनाको लागत महँगिएको छ । २५ वर्षअघि जति क्षमता थियो, त्यो भन्दा बढ्न सकेको छैन । देश विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै यही हो ।
ठूला आयोजनामा आवश्यक प्रविधि र व्यवस्थापनका लागि अझै पनि आउटसोर्सिङ नै भइरहेको छ । हामी आफैंले केही उत्पादन गर्न सकेनौं, विप्रेषण र खरिदमा अल्झियौं । भोलि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि केन्द्रको यही समस्या विकेन्द्रित भयो भने निकै समस्या पर्छ ।
केही समयका लागि आवश्यकताअनुसार बाहिरबाट प्रविधि ल्याए पनि हामी आफैंले विकास र व्यवस्थापन गर्ने हैसियत बनाउनुपर्छ । दिगो विकासका लागि पनि प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ ।
सरकारले अपेक्षाअनुसार विनियोजित बजेट खर्चन सकिरहेको छैन, अर्कातर्फ पूर्वाधार परियोजनामा आवश्यक लगानी परिपूर्ति गर्न वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुने क्रम बढ्दो छ, स्थानीय तहले पनि स्रोत व्यवस्थापनका लागि बैदेशिक सहायता लिनुपर्ने अवस्था आउने जोखिम कति देख्नुहुन्छ ?
स्थानीय तहले बाह्य सहायता लिन सन्दर्भमा चेक एन्ड ब्यालेन्सका केही प्रावधान छन् । प्रदेशले एक त केन्द्रको अनुमति बिनावैदेशिक सहयोग लिन सक्दैन, अर्कातर्फ केन्द्र जमानी नबसेसम्म दाताले पनि तल्लो तहमा सहायता प्रवाह गर्दैनन् । अनुदानको अंश घटिरहेको अवस्थामा तल्लो निकायले वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने विषय निकै संवेदनशील हो ।
सहयोग उठ्नका लागि लिने हो, न कि परनिर्भरताका लागि । प्रदेशहरूमा एक तहको विकास गर्न सहायता परिचालन हुनैपर्छ, किनकि हाम्रो आन्तरिक स्रोत पर्याप्त छैन । तर, वैदेशिक सहायताको भरमा सधैभर कुनै देश टिक्न सक्दैन ।
परियोजनामा स्रोत जुटाउनकै लागि सरकारले केही अघि लगानी सम्मेलन गर्याे, दाताहरूले झन्डै १५ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्, यद्यपि वातावरणलाई लिएर दाताहरू लगानीका लागि हच्किरहेको सुनिन्छ, अपेक्षित लगानीबाट विकास गर्न सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
लगानीका लागि प्रतिबद्धता गरेका दाताको पृष्ठभूमि पनि हामीले हेर्नुपर्छ । नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुको दुईवटा कारण देख्छु । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन भन्ने खालका भ्रमपूर्ण हल्ला फिँजाइएको छ, दाताहरूले नै यस्तो हल्ला फिँजाइरहेका छन् ।
अर्को चाहिँ नेपालमा लगानी गर्छु भन्ने व्यक्ति वा संस्था तल्लोस्तरको हुने गर्छ । नेपालमा जोखिम मोल्नुपर्छ भन्ने हल्लाका भरमा नाफाको अत्यधिक सीमा राखेर लगानी प्रस्ताव गर्ने समस्या छ । उही प्रकृतिको परियोजनामा लगानी गर्दा भारतमा ५ प्रतिशत नाफा अपेक्षा गर्ने लगानीकर्ताले नेपालमा १५ प्रतिशत नाफा पाउनुपर्ने जिकिर गर्छ, यति हुँदा पनि हामीले असल लगानीकर्ता पाउन सकिरहेका छैनौं । लगानीबारेको भ्रम चिर्न सरकारले लबिङ गर्नुपर्छ ।
यसअतिरिक्त श्रम विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक लेनदेनजस्ता विकृति नियन्त्रणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । यद्यपि केही वर्षदेखि देखिने गरी यस्ता विषय सतहमा आएका चाहिँ छैनन् । लगानीको वातावरण निर्माणका लागि दलीय जागरूकताचाहिँ हुनैपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेपछि प्राप्त नाफा सजिलै फिर्ता लैजान सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निश्चित अवधिपछि आयोजना बिक्री वा पुँजी फिर्ता गर्ने विकल्प पनि दिनुपर्छ । लगानीका लागि एकद्धार प्रणाली बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तह बजेट संघीयता